६ जनाको ह’ त्या रहस्यमय बन्दै थप चार जना माथि अनुसन्धान सुरु ! – Online Khabar 24
६ जनाको ह’ त्या रहस्यमय बन्दै थप चार जना माथि अनुसन्धान सुरु !
September 19, 2021 September 19, 2021 by admin admin
मादी नगरपालिकामा भएको ह’त्याका’ण्डमा संलग्न भएको आ’रोपमा प्र’हरीले थप चार जना माथि अनुस’न्धान सुरु गरेको छ।
एकै परिवारका ६ जनाको ह’ त्यामा संलग्न स्थानिय लोकबहादुर कार्कीलाई प्र’हरीले प’क्राउ गरिसकेको छ।
लोकबहादुरका भाइ नरेश समेत प्र हरी निय’न्त्रणमा छन्। ह’ त्यामा संलग्न लोकबहादुर र उनका भाइ नरेश बाहेक अन्य ४ जनामाथि प्रह’रीले अनुस’न्धान थालेको छ।
भदौ २१ गते बिहान लोकबहादुरले ६ जनाको ह’ त्या गरेको बताइएको छ। लोकबहादुरको बयानका आधारमा उनका भाइ नरेशलाई पक्रा’उ गरेको हो। ह’ त्यामा संल’ग्न भएको आ’ रोपमा प’क्राउ परेका लोकबहादुर र नरेशको बयानका आधारमा अन्य ४ जना माथि समेत प्र’हरीले अनुस’ न्धान थालेको छ।
प्रहरीले ती ४ जनाको नाम भने खुलाएको छैन। प्रहरीले मृ’तक रञ्ज’नाको हराए’को मोबाइल लोकबहादुरको घरमा फेला पारेपछि अनुस’न्धान लोकबहादुर र उनका भाइ नरेश माथि केन्द्रि’त भएको छ। लोकबहादुर र उनका भाइ नरेश सँगको बयानका आधा’रमा प्र’हरीले थप ४ जनालाई अनुस’न्धानको दाय’रामा ल्याएको हो।
घ’नाको सातौं दिन अ’भियु’क्त लोकबहादुर कार्कीलाई प’क्रा’उ गरी प्र’हरीले सार्वजनिक गरेको थियो। मृ’ तक रञ्जना कार्कीको हराएको मोबाइल प्रह’रीले फेला पारेपछि अनु’ सन्धान टोली पुनः घ’टना स्थल केन्द्रित बनेको १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसपी नवीनराज राईले बताए। ह’ त्या आ’रोपमा पक्रा’उ परेका लोकबहादुरको घरबाट बिहीबार मोबाइल भेटिएको हो।
रञ्जनाको मोबाइल घट’ना भएको बिहान दे खि नै हराएको थियो। मोबाइल स्विच अफ भएकाले प्र’हरीले सम्भावित ठाउँमा खोजी गरिरहेको थियो। घ’टनाबारे थप प्रमाण फे’ला परेपछि संघीय इकाई प्र’हरी कार्यालय धरानका एसपी भीम दाहालको नेतृत्वमा १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहित ६ जनाको टोली घ’टना स्थल पुगेर पुनः अनुस’न्धान सुरु गरेको छ। ‘घट’नामा अन्य व्यक्तिहरुको समेत सं’लग्नता भएको आशं’कामा अनुस’न्धान सुरु गरेका छौँ, एसपी राईले अन्नपूर्णसँग भने।
छिमेकीले समेत घ’टनाको जानकारी नदिँदा प्रहरी अनुस’न्धानमा जटि’लता भएको थियो। एक जना व्यक्तिले मात्र उक्त घ’टना गरा’उन नसक्ने प्रहरीकै केही अधि’कारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
लोकबहादुरलाई सार्वजनिक गरेकै दिन संघीय इकाई प्र’हरी कार्यालय धरानका एसपी भीम दाहाल, प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख डिआ’ईजी अरुणकुमार बीसी, केन्द्रीय अनु’सन्धान ब्युरो डीएसपी रुगमबहादुर कुँवर सहितको अनु’सन्धान टोली आ–आफ्नो कार्यालय फर्किएका थिए। थप अनुस’न्धान र सुर’क्षाका लागि इलाका प्र’हरी कार्यालय चैनपुरका प्रहरी निरीक्षक योगराज खतिवडा सहितको टो’ली घ’टना स्थ’लमै रहेको थियो। साभार अन्नपुर्ण पोस्टबाट साभार गरियको ।
Prevयिनै हुन् पोर्चुगलबाट खुसि हुदै नेपाल फर्केका श्रीमान श्रीमती जस्ले अका’लमै गुमाए ज्या’न !
nextअनौठो पत्याउनै नसकिने काम गर्दा गर्दै समातिय यी महिलाहरू : थाहा पाउँदा सबै चकित